पुरुषले सपनामा कुनै पनि स्त्रीलाई चुम्बन गरेको देखेमा मिल्छ यस्ता फल ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/पुरुषले सपनामा कुनै पनि स्त्रीलाई चुम्बन गरेको देखेमा मिल्छ यस्ता फल !
सपनालाई विशवास नगरेपनि कतिपय यस्ता सपनाहरु हुन्छन् जुन सपनाले निकै चिन्तित बनाउँछ । भनिन्छ सपना र ज्योतिष उस्तै हुन् । अक्सर विश्वास नगर्नेलाई सपना बकवास जस्तै लाग्छ ।
तर ज्योतिष शास्त्र अनुसार सपनामा कुनै पुरुषले महिलालाई चुम्बन गरेको देख्यो भने पुरुषको लागि फाइदाजनक रहेको हुन्छ । यस्तो सपना देख्ने मानिसले अचानक ठूलो राशीको धन प्राप्त गर्नेछन् । सपनामा यदि कुनै पुरुषले बुर्का लगाएको देख्यो भने आफ्नो आफन्तबाट विश्वास घात हुनेछ ।
सपनामा कुनै महिलाले तास खेलको देख्यो भने सम्पति प्राप्त हुन्छ । सपनामा आफ्नो प्रेमीकासँग घुम्न गएको सपना देख्यो भने दाम्पत्य जीवन सुखमय रहन्छ । सपनामा कुनै गोरी महिलाले अंगालो हालेको र अप्सराहरुको दर्शन गरेको देखेमा अपार धन लाभ हुन्छ । सपनामा भिखारी देखेमा पनि धन लाभ हुन्छ ।